Robin van Persie oo loo caleemo saaray captain-ka cusub ee Arsenal (Sawiro) – SBC
Robin van Persie oo loo caleemo saaray captain-ka cusub ee Arsenal (Sawiro)
Xidiga caalamiga ah ee dalka Holland u dhashay kana mid ah kooxda Arsenal Robin van Persie ayaa si rasmi ah loogu caleemo saarey captain-ka cusub ee kooxda ka dib markii uu captain-kii hore Cesc Febrgeas uu ku biiray kooxda Barcelona oo markii hore uu ka yimid isagoo 16 sano jir ah.
Tababaraha kooxda Waqooyiga London ka dhisan ee Arsenal Arsene Wenger ayaa shaaca ka qaaday in calaamada gacanta bidix si rasmi ah loogu wareejiyey RPV isagoo arintaasi ku xaqiijiyey wareysi uu siiyey website-ka ku hadla afka kooxda Arsenal.
Van Persie wuxuu ku soo biiray kooxda Arsenal bishii May 2004-tii waxaa la sheegay in uu ku xigeen u noqon doono daafaca Thomas Vermaelen.
“Waa hogaamiye qaabka uu u ciyaaro, awoodiisa uu ku doonayo in uu ku gaaro guul” ayuu tiri Tababare Arsene Wenger oo ka sheekeynayey ujeedada uu ugu duurtey 28 jirka reer Holand uu captain u noqdo kooxda Qorileyda.
“Inaad noqoto captain waa adiga oo wakiil ka ah kooxda, diyaar ayaana u ahay arintaasi” ayuu yiri RVP oo ka hadlayey dareenkiisa ku aadan magacaabista loo magacaabay captain-ka kooxda.